Vhura-sosi yepurasitiki filament ye 3D maprinta | Linux Vakapindwa muropa
Ehe, iri risingazivikanwe zita, asi IC3D ndiyo nyowani yepurasitiki filament kuti iwe unogona kutarisa sekushandisa kune yako 3D purinda. Yakavhurika sosi yepurasitiki filament, sekureva kwenyaya, sezvo makambani anogadzira 3D maprinta anotengesa chete zvigadzirwa zvemidziyo uye zvekutanga zvinhu zvakadai semapurasitiki zvinoshandiswa (zvakaenzana nevheti kana toner cartridges emaprinta akajairwa kune avo vasina kujaira Kudhinda kwe3D).
Uye zvakare, mapurasitiki anodikanwa kuti agadzire matatu-mativi akadhindwa manhamba anotengeswa nemitengo yakakwira, sezvo ivo vagadziri kuwedzera mitengo uye ivo vanotora mukana wevashandisi mune izvi. Iyo multimeter yeABS senge iyo inowanikwa mumatombo eLEGO anogona kusvika kusvika kumazana e € / kg. Uye makambani mazhinji anotyisidzira vatengi vavo kuti vacharasikirwa newaranti kana vakashandisa imwe inoenderana kana isingadhuri filamendi. Neraki, nekuvhurwa kwemahara maprinta senge iyo RepRap 3D yakauya kudzikiswa kwemitengo, asi ichiri kukwana kune homwe zhinji ...
Asi dambudziko remafilamenti rinoramba riripo, sezvo zvese zvaive zvinhu zvakagadzirwa mumarabhoritari nemakambani uye nekodzero dzevaridzi pamusoro pe "recipe" yepurasitiki. Vakapa patent izvi uye vaigona kutamba nemitengo sezvavaida. Asi ikozvino kuyedza kwakaitwa kugadzira rondedzero yakadzama, kuwedzera kune software yakadai seOpenSCAD, uye FreeCAD, pamwe nemikana yekudzokesa (ona recyclebot) yemapolymers kuti vaise pakushandisa kwevashandisi ve3D. Uye zvino zvinouya IC3D neIC3D yako ABS OSHWA (Vhura Sosi HardWare Sangano) yakasimbiswa. Ivo zvakare vanovimbisa kugadzirisa kusagadzikana, kunyatsoita, kusiyanisa uye mhando yezvinhu zveiyo indasitiri.
Kuti uone zvimwe zvakawanda nezve plastiki, unogona kushanyira peji re GitHub iko kune rakadzama rePDF gwaro nezvazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Vhura-sosi yepurasitiki filament ye 3D maprinta
Isaac, ndinogara ndichiverenga zvawatumira, ini ndakanaka kwazvo. Ini ndinongogadzirisa zita racho, kwaunoisa "kutaura" pachinzvimbo che "plastiki", uye chinongedzo chawakaburitsa hachishande kana.
Ini ndinotora mukana uno kukubvunza nezvenyaya iyi: https://www.linuxadictos.com/crear-distribucion-linux.html
Mazhinji emidziyo yawataura haisisipo kana haashande. Systemback haitenderi kuisa iyo Debian 9 system pane hard drive.
Ndingafarire kana iwe ukakwanisa kukurudzira software kwandiri kuti ndigadzire yangu mhenyu Debian kugovera.
Ndinokutendai zvikuru nekutitevera uye nekugadzirisa. Zvakanaka pane dzimwe nzira dzakawanda. Ipa Pinguy Muvaki kuyedza kuona kana uchiifarira. Kana iwe usingazvifarire, usazeze kusiya zvaunotaura uye ini ndichafara kuramba ndichikubatsira ...
Mufaro netariro ndakabatsira.
Mhoroi, maita basa nekukurumidza mhinduro uye hukama. Pane iro SourceForge peji rePinguy Builder rinoti rinoshanda chete kuUbuntu uye zvichibva pariri, asi chinangwa changu chaive chekuzviita naDebian 9, iri padhuze kugadzikana.
Ndakaedza Systemback ndikagadzira iyo inorarama system, asi kana ndichiiisa pane rakaomarara dhisiki kukanganisa kunomuka Ndakabvunza anovandudza uye akati hazvaizotsigirwa uye chirongwa ichi charega Ini handizive nezve chero imwe sarudzo, saka zvinogona kubatsira kana iwe ukandipa zano pane yakafanana software inoshanda naDebian.
Ahh yeDebian ... zvakanaka ini handina kumbozviitira iyi distro uye paivewo nemamwe mapurojekiti ayo ayo akave akarega kusuwa. Zvinonyadzisa
Edza Live-Mashiripiti, pamwe ichiri kushanda ... nayo unogona nyore kugadzira yakasarudzika ISO nemapakeji aunoda.
Chimwe chinhu chandinogona kufunga nezvacho kumanikidzwa kuisirwa, kuti uigadzirise, asi zvakati omei.
Uye imwezve nzira, asi zvakare inonetesa ndeye kushandisa chroot cage.
Sarudzo yakanyanyisa ndeye LFS, kutanga kubva pakutanga ...
kushambadzira kwakanaka kwazvo kunokudza chirongwa ichi mamwe mapurojekiti akafanana anodiwa munzvimbo dzese